बिश्व – Hatuwa Herald
Home > बिश्व
हतुवा हेराल्ड २१ माघ २०७६, मंगलवार February 4, 2020 बिश्व, स्वास्थ्य	0
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ सय नाघेको बताईएको छ। संक्रमितको संख्या २० हजार माथि पुगेको अनुमान छ। चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ सय २५ पुगेको हो। यो भाइरसको संक्रमणले हिजो सोमबार मात्र ६४ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै चीन बाहिर गत आइतबार फिलिपिन्समा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने आज मात्र हङ्कङ्गमा एक संक्रमितको मृत्यू भएको बताईएको छ। चीनमा मात्रै २० हजार ४ सय ३८ जना कोरोनाको संक्रमणमा परेका छन्। चिनियाँ अधिकारीको भनाइ उद्धृत गर्दै अलजाजीराले जनाए अनुसार हुबेइ प्रान्तमा मात्र सोमबार २ हजार ३ सय ४५ जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित फेला परेका छन्। योसँगै हुबेइ प्रान्तमा मात्र
हतुवा हेराल्ड २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार June 5, 2019 बिश्व	0
जुन -४ सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा के भएको थियो ? १० अप्रिल १९८९ मा लाखभन्दा बढी प्रदर्शनकारी स्वतन्त्रताको माग गर्दै तियानमेन स्क्वायरमा भेला भएका थिए । चीनको वामपन्थी शासनको इतिहासमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन मानिन्छ । यो आन्दोलन ६ हप्तासम्म चलेको थियो । तत्कालीन समयमा सोभियत संघ ढल्ने अवस्थामा पुगेर संसारभर कम्युनिस्टहरुको पकड गुम्दै गएका बेला चीनमा पनि कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भए पनि त्यसले सफलता पाउन सकेन । उनीहरुले कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य र लोकतन्त्रको माग गरेका थिए । सो आन्दोलन देशका अत्य सहर र विश्वविद्यालयमा समेत फैलिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा उनीहरुले बढ्दो महँगी र कम तलब लगायतका विषय समेत
हतुवा हेराल्ड १८ जेष्ठ २०७६, शनिबार June 19, 2019 कविता, बिश्व	0
१ . पितृत्व ••••••••••• भलै मैले एउटा अनाथ किसिमको लेखनको सपना पनि देख्दिनँ त्यस्ता मान्छेहरूले मलाई हाँसछन् जसले आफ्नो रचनालाई आफ्नो सन्तान सरह मान्छन् त्यस्ता मान्छेहरू मलाई हसाँउछन् उनीहरूलाई आफ्नो रचनालाई खाना खुवाउनु पर्छ होला जसरी गोठालोले गर्छ ब्यर्थ झुन्डको रक्षा सायद उनीहरूलाई पनि गर्नु पर्छ होला जसले गर्दा उनीहरू दूध पिलाउन सकुन् जब सम्म उनीहरूलाई राम्रो सरकारी जागीर दिलाउन सक्नेछैनन्। २ . मार्क्सको सम्मान ••••••••••••••••••••• झिलिमिली देखिने दोकानहरू जहाँ नयाँ नयाँ भित्री बस्त्रहरूको बाहार आएको छ। त्यही अगाडि उभिँदा म आफूलाई रोक्न सक्दिन मार्क्सको बारेमा सोच्नवाट। जति पनि मानिसले मलाई प्रेम गरे उनीहरूमा एउटा कुरा साझा थियो त्यसैले मैले सबैलाई स्वीकृति दिए कसैलाई कम दिए कसैलाई धेरै दिए कपासको त्यो गुडिँयालाई निमोठन जुन मेरो आत्मामा लुकेको थियो। मार्क्स काल मार्क्स म उनीहरूलाई कहिले क्षमा गर्दिन। ३
जनक कार्की	Read More
हतुवा हेराल्ड १७ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार बिश्व	0
एजेन्सी/ उत्तर कोरियाले सर्वोच्च नेता किम जोङ उन तथा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच फेब्रुअरी महिनामा भियतनामको राजधानी हनोईमा भएको असफल शिखर वार्ताअघि अमेरिकी अधिकारीसँगको छलफलमा सहभागी रहेका अमेरिकाका लागि उत्तर कोरियाली विशेष दूतसहित चार वरिष्ठ कुटनीतिज्ञलाई मृत्युदण्ड दिएको दक्षिण कोरियाली अखबारले जनाएको छ । दक्षिण कोरियाको चोसुन इल्बो नामक अखबारले श्रोतलाई उद्धृत गर्दै शुक्रबार जनाएअनुसार उक्त शिखर वार्ताअघि अमेरिकी टोलीसँगको छलफलमा सहभागी कुटनीतिज्ञ किम ह्योक चोललाई राजधानी प्योङ्याङमा रहेको मिरिम विमानस्थलमा गत मार्च महिनामा मृत्युदण्ड दिइएको हो । उनले अमेरिकाका लागि जासुसी गरेको तथा अमेरिकी मनोविज्ञान नै नबुझी छलफलमा सहभागी भएको र छलफलमा खराब प्रदर्शन गरेको अभियोगमा किम ह्योक चोलसहित अन्य चार
हतुवा हेराल्ड १३ जेष्ठ २०७६, सोमबार May 27, 2019 बिश्व	0
एजेन्सी/ ओसामा बिन लादेनलाई कसरी मारिएको थियो भन्नेबारे अमेरिकी सरकार र सेनाले विभिन्न पुष्टिहरु प्रदान गरेको थियो । पाकिस्तानको एक घरमा लुकेर बसेका लादेनलाई सेनाले गोली प्रहार गरी मारेको थियो । सन् २०११ मे २ मा अमेरिकी सेनाको टोलीले आतंकवादी संगठन अल कायदाका नाइके बिन लादेनको हत्या गरेको थियो । उनलाई कसरी मारिएको थियो भन्नेबारे अमेरिकी सरकार र सेनाले विभिन्न पुष्टिहरु प्रदान गरेको थियो । पाकिस्तानको एक घरमा लुकेर बसेका लादेनलाई सेनाले गोली प्रहार गरी मारेको थियो । उनकी कान्छी पत्नी अमलले एक पुस्तकको लागि पहिलो पटक घटनाबारे बयान दिएकी थिईन्। हत्या हुने बेला अमल लादेनसँगै थिइन् । क्याथी स्कट क्लार्क र
ओसामा बिन लादेन	Read More
हतुवा हेराल्ड १० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार May 27, 2019 बिश्व, राजनिती	0
एजेन्सी । भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन सँगसँगै केही प्रदेशमा विधानसभा निर्वाचन पनि भएको थियो । तीमध्ये नेपालसँग सिमाना जोडिएको र बहुसङ्ख्यक नागरिक नेपाली भाषी रहेको सिक्किममा पनि विधानसभा चुनाव भएको थियो । सिक्किम विधानसभा चुनावको मतपरिणाम बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । उक्त परिणामले २५ वर्षदेखि सिक्किममा शासन गरिरहेका पवनकुमार चाम्लिङको पार्टीलाई सत्ताच्युत गरेको छ । बिहीबार राति सार्वजनिक भएको मतपरिणाम अनुसार सिक्किमको विधानसभाको कुल ३२ सिटमा चाम्लिङको सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले १५ सिट जितेको छ भने सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चले १७ सिट जित्यो । सिक्किममा सरकार गठन गर्नका लागि १६ सिट पर्याप्त हुन्छ । योसँगै सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको शासनको अन्त्य भएर नयाँ पार्टीको सरकार बनाउने अवस्थामा
हतुवा हेराल्ड २८ बैशाख २०७६, शनिबार May 11, 2019 प्रबिधी, बिश्व	0
दक्षिण कोरिया/ नविनतम विकास र प्रविधिमा निकै अगाडी रहेको दक्षिण कोरियाले स्वचालित कार निर्माण गर्ने तयारि गरेको छ । बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयका अनुसार उक्त प्रबिधिको लागि सरकारले आगामी ३ बर्षको अबधिमा १४.३ बिलियन वोन अर्थात १२ .२ मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने छ । कृतिम बौद्विकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्स – ए आइ ) प्रविधिमा आधारित उक्त कार निर्माणको लागि सरकारले स्थानीय कम्पनिहरुलाई प्रबिधि क्षेत्रमा थप सहयोग गर्ने बताएको छ । यसरि निर्माण गरिने स्वचालित कारको लेबल ३ सम्म आबस्यक परेमा मानब चालकले समेत निर्दिष्ट गर्नु पर्ने छ भने लेबल ४ र ५ को लागि मानब चालकको आबस्यकता पर्ने छैन । यी कारहरुले आफ्नो
हतुवा हेराल्ड २७ बैशाख २०७६, शुक्रबार May 20, 2019 बिश्व, समसामयिक	0
दक्षिण कोरिया/ गुडीरहेको कारले ठक्कर दिदा कोरियन नायिका हान जी – सुङको मृत्यु भएको छ । स्थानीय संचार माध्यमहरुका अनुसार गत मे ६ को बिहान इन्छन देखि गिम्पो जाने क्रममा उनलाई बीच बाटोमा ट्याक्सी तथा कारले एकै पटक ठक्कर दिएका थिए । श्रीमान संग संगै रहेकी २८ बर्षीय हानलाइ ३ लाइनको बाटोमा कार रोकी बाहिर निस्किने क्रममा पछाडी बाट आएका गाडीले ठक्कर दिएका थिए । संगै रहेका उनका श्रीमान लाइ उदृत गर्दै गिम्पो प्रहरीले जनाए अनुसार बिहान ३ बजेर ५० मिनेट जादा उक्त दुर्घटना भएको थियो । एक्स्प्रेस रोडको तीन लाईनवाला बाटोको बिच लेनमा आफ्नो कार पार्क गरि पिसाब फेर्न बाहिर
पाकिस्तानमा बिष्फोट्, कम्तिमा पाँच जनाको मृत्यू।
हतुवा हेराल्ड २५ बैशाख २०७६, बुधबार May 9, 2019 बिश्व, समसामयिक	0
एजेन्सी / पाकिस्तानको लाहोरस्थित सूफी मुसलमानहरूको एउटा धार्मिक स्थलबाहिर विस्फोटन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार विस्फोटनमा परेर कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय जियो न्यूज टेलिभिजनका अनुसार धेरै व्यक्ति घाइतेको भएको आशङ्का गरिएको छ। जियो न्यूजले प्रहरीको एउटा गाडीलाई आक्रमणको तारो बनाइएको जनाएको छ। प्रारम्भिक विवरणहरूका अनुसार दाता दरबार सुफी दरगाहनजिकै विस्फोटन भएको थियो। विस्फोटन भएको ठाउँमा ठूलो सङ्ख्या सुरक्षकर्मीहरू पुगेका छन्। अहिलेसम्म कसैले विस्फोटनको जिम्मेवारी लिएको छैन। शिया र सुन्नी दुवै सम्प्रदायका हजारौँ मुसलमानहरू सो दरगाहमा प्रत्येक वर्ष जान्छन्। सो स्थलमा गैरमुस्लिमहरू पनि दर्शन गर्न जान्छन्। सन् २०१० मा सो दरगाहमा भएका दुई आत्मघाती विस्फोटनमा दर्जनौँ मानिसहरूको ज्यान गएको थियो। लाहोर पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर
के तपाई ट्याटू को शौखिन हुनुहुन्छ?
हतुवा हेराल्ड १८ बैशाख २०७६, बुधबार बिश्व	0
एजेन्सी । अमेरिकामा दश मध्ये तीनजनाले ट्याटु हानेकै हुन्छन् भने नेपालमा पनि पछिल्लो समय यसको ट्रेन्ड बढ्दै गइरहेको छ । तर अघिल्लो दशकको तुलनामा ट्याटुप्रतिको धारणा परिवर्तन हुँदै गइरहेपनि अझै काम खोज्नेहरुले अस्वीकृत हुने डरले आफ्नो ट्याटु लुकाउने गरेको पाइन्छ । त्यस्तै ट्याटुले स्वास्थ्य र शरीरमा हानि पुर्याउने सम्बन्धी पनि मानिसहरुमा उत्तिकै चिन्ता रहेको छ । यसरी अनुन्धानमा पनि ट्याटु खोप्नेहरुको स्वास्थ्य नहानेकाहरुको भन्दा फरक हुनेबारे सुरुवाती प्रमाण मात्र फेला पारिएको अध्ययनकर्ताहरुको भनाइ छ । तर ट्याटु खोप्ने बित्तिकै छाला सुन्निनु, रातो हुनु, दुख्नुलाई भने सामान्य अनुभव मानिने अमेरिकन एकेडेमी अफ डर्मेटोलोजी, एएडीले जनाएको छ । यसरी अधिकांश मानिसमा सामान्य